तारा जहाज दुर्घटनामा परेकी एयर होस्टेज किश्मीको टिकटक भिडियो भाइरल ! – Annapurna Post News
तारा जहाज दुर्घटनामा परेकी एयर होस्टेज किश्मीको टिकटक भिडियो भाइरल !
June 3, 2022 sujaLeaveaComment on तारा जहाज दुर्घटनामा परेकी एयर होस्टेज किश्मीको टिकटक भिडियो भाइरल !
पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२, सानोसरेमा दुर्घटना भएको थियो । विमानमा चालक दलका तीन सदस्य र १९ यात्री सवार थिए । आइतबार बिहान ९ः५५ बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको ९एनएईटी विमान सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो ।
नाइन एन–एईटी कलसाइनको जहाजमा २ विदेशी, ४ भारतीय र १३ नेपाली यात्रु सवार थिए । जहाजमा चालक दलका ३ सदस्य पनि थिए । जहाजलाई क्याप्टेन प्रभाकरप्रसाद घिमिरेले उडाएका थिए । को पाइलट उत्सव पोख्रेल र विमान परिचारिका किस्मी थापा थिइन् । जहाज दुर्घटनामा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–११ लोटाका एकै परिवारका सात सदस्य पनि परेका छन् । मृतक सबैको शव काठमाण्डौ ल्याएर महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमपछि परिवारलाई बुझाईएको छ । परिवारले सबै बुझेर आफ्नो रिती अनुसार अन्तिम संकार गरेका छन् ।
जहाज दुर्घटनाहरूमा देखाइन्छ मानवीय त्रुटि-मुलुकमा जे जति हवाई दुर्घटना भए त्यसको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ, मानवीय त्रुटि। जहाज दुर्घटनापछि विभिन्न समयमा बनेका जाँच आयोग तथा छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनले पनि ९८ प्रतिशत दुर्घटनालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा केलाएको भेटिन्छ।
हेलिकप्टर होस् वा हवाईजहाज पाइलटको गलत निर्णयले गर्दा दुर्घटनामा परेको ती प्रतिवेदनले बुँदागत रूपमा नै केलाएका छन्। तर, ती दोष थोपरिएका पाइलट कोही जीवित नभएकाले प्रतिवेदनमा नै लेखेकालाई मानिन्छ। पाइलट नै दोषी देखिन्छन्/देखाइन्छ।
नेपालमा हुने गरेका हवाई दुर्घटनालाई लिएर देशभित्र र बाहिरबाट प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। तर, बारम्बार हुने गरेका हवाई दुर्घटनाका विभिन्न कारण रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन्। भन्छन्, ‘पाइलटको अत्याधिक आत्मविश्वास, उडान मापदण्डलाई बारम्बार नमान्नु, दबाब÷क्षमताको अभाव, प्रतिकूल अवस्थामा सही निर्णय लिन नसक्दा पाइलटबाट मानवीय त्रुटि हुन्छ र दुर्घटना हुन जान्छ। तर, त्यो मात्रै कारण हो भनेर त, भन्न मिल्दैन।’